पाँचथर हत्याकाण्ड: आफन्तले लगाए प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप ! – Hamrosandesh.com
पाँचथर हत्याकाण्ड: आफन्तले लगाए प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप !
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेमा ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामुहिक हत्याकाण्डमा मारिएका आफन्तले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । दुई परिवारका नौ जनाको हत्या एक जनाले मात्रै गरेको संकेत गरेर प्रहरीले हत्यारा उम्काउन खोजेको उनीहरुको गम्भीर आरोप छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा धरानबाट देबेन्द्र पौडेल, झापाबाट लक्ष्मी काफ्ले र पाँचथरबाट सरोज शर्माले लेखेका छन्।
आफन्तले हत्यामा अन्यको पनि संलग्नता भएको दाबी गरेका छन्। आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई सबै दोष देखाएर हत्यारा उम्काउन खोजे सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मृतकका आफन्त शान्त लिम्बुले चेतावनी दिइन्।
हत्याराले बनाएको पहिले देखिको योजनाप्रति प्रहरीले वेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाई छ । प्रहरीले खानामा सिसा मिसाएको घटना अनुसन्धान नगर्दा सामुहिक हत्या हुन पुगेको मृतकका आफन्त मिक्लाजुङ–२ का प्रेमकुमार राईले बताए। ‘सिसा काण्डमा जाहेरी परे पनि प्रहरीले गम्भीरतापुर्वक अनुसन्धान नगर्दा सामुहिक हत्या भयो,’ उनले भने, ‘वास्तविक छानबिन र प्रगतिबारे जानकारी नदिएसम्म शव जिम्मा लिदैंनौं।’
मिक्लाजुङ–३, आरुबोटेमा धनराज सेर्माको पाँच र बमकुमार फियाक परिवारका चारजनाको सोमबार राति हत्या भएको थियो । बमकुमार ससुरा हुन् । धनराज उनका ज्वाइँ हुन् । ज्वाई ससुराको घरको दुरी पैदल हिँडेर आधा घण्टाको फरकमा रहेको सोही वडाका अध्यक्ष हस्तराज फियाकले जानकारी दिए ।
उनले पनि घटनामा एउटैको मात्र संलग्नता हुन नसक्ने बताए । घट्नालाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरे। हत्यामा संलग्न भनी शंका गरिएका मिक्लाजोङ ७ का मनबहादुर माखिमले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।
प्रहरीले मनबहादुरले नै हत्या गरेको प्रारम्भीक अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ। शव पोस्टमार्टमपछि अपराह्न ४ बजेसम्म आफन्तले बुझेनन् । मर्जरीमा राख्न ठाउँ नभएको प्रतिष्ठानले भनेपछि शव जिल्ला लगिएको छ।